जान्नुहोस घरेलु तरीकाबाट कसरी योनि कसिलो बनाउन सकिन्छ ? - Experience Best News from Nepal
महिलाहरुले कसरी यौन अंग योनीलाई कसिलो गर्ने त ? महिलाहरुले यी उपाय लगाउन सक्नुहुनेछ
यौनांग क्षेत्रको मांसपेसीलाई बलियो बनाउन गरिने कसरतलाई केगेल -Kegel_ कसरत भनिन्छ । योनिमा औंला पसाई औंलालाई अँठ्याउने अर्थात् खुम्च्याउने गर्दा यो मांसपेशीलाई तपाईले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।
उक्त मांसपेशी पहिचान गरेपछि औंला नपसाई पनि खुम्च्याउन सकिन्छ । सुरुमा यस्तै १ सेकेन्डसम्म बेस्सरी खुम्च्याएर राख्ने र छाड्ने अर्थात् खुकुलो बनाउने । बिस्तारै यसलाई बढाएर ५ सेकेन्डसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । बिस्तारै १० देखि १५ पटकसम्म संकुचित गर्ने (खुम्च्याउने) र छोड्ने । यो क्रम बढाउँदै दिनभरिमा यस्तो गर्ने क्रम २० पटकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।
६ हप्तासम्म नियमित रूपमा यो कसरत गरे फरक महसुस हुने गरी केही फरक देखिन्छ । यो मांसपेशी संकुचित गरेर यौनसम्पर्कका बेला लिंगलाई बेस्सरी समात्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले महिलालाई मात्र होइन, पुरुषलाई पनि यौनसुख प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ । यसबाहेक अन्य उपायहरूका बारेमा भन्नुगर्दा, निश्चित तौलका योनि कोन -vaginal cone_ महिलाको योनिमा राखेर त्यसलाई अड्काइराख्न भनिन्छ, जसले गर्दा यौनांगको मांसपेशी बलियो होस् ।
त्यसैगरी विद्युतीय उत्तेजना -electric stimulation_ अर्थात् योनिमा एक किसिमको यन्त्र -probe_ राखेर विद्युत्को हल्का करेन्ट प्रयोग गरी यौनांग क्षेत्र -pelvic floor_ का मांसपेशीलाई खुम्चन र खुकुलो हुन उत्तेजित पारिन्छ । Neocontrol व्यापारिक नाम भएको यो साधन एउटा विशेष किसिमको कुर्सी हो । विशेष किसिमले चुम्बकीय क्षेत्रको प्रयोग गरेर यौनांग क्षेत्रको मांसपेशीलाई उत्तेजित पारिन्छ ।
यो उपचार सामान्यतः २० देखि ३० मिनेटका लागि साताको दुईपटक यस्तै आठ साताजति गरिन्छ । अन्त्यमा योनि खुकुलोपनको समस्या अति नै छ भने ] vaginoplasty (भजाइनोप्लास्टी) शल्यचिकित्सा पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
यस्तो शल्यचिकित्सालाई सामान्यतया अन्तिम उपायका रूपमा लिइन्छ । अचेल यसमा लेजर प्रविधिको प्रयोग समेत सुरु भएको छ ।
यौनसम्पर्क मार्फत् सर्ने चार नयाँ खतरनाक रोगहरु
यौन सम्पर्कपछि महिलाले सोच्ने १२ कुरा !!
किन गर्मी महिनामा हुन्छ महिला पुरषमा बढी उत्तेजना ! यस्तो छ डाक्टरको भनाइ